Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 19
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 19
Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 19
Vateresi vaiwanzova vanyori, zvisina tsitsi vaitora mari yakawandisa kubva kuvanhu vachizviitira ivo, vaibva vava vapfumi. KuJeriko kwaive nemurume mupfupi, ainzi Zakeo, akakwira mumuti kuti aone Jesu, aive akakombwa nevanhu vazhinji. Jesu akamudaidza kuti aburuke akaenda naye kumba kwake, zvakashamisa vanhu vose kuti aizoshanyira mutadzi akadaro.
RUKA 19:8 Ipapo Zakeo akamira, akati kunaShe: Tarirai Ishe; ndinopa varombo hafu yefuma yangu, vuye kana ndatorera mumwe chinhu chake, nokunyengera, ndinomudzosera zvava zvina.
9 Jesu akati kwaari: Nhasi ruponeso rwasvika paimba ino; nokuti naiye vo mwanakomana waAbrahama.
10 Nokuti Mwanakomana womunhu wakavuya kuzotsvaka nokuponesa chakarashika.
Zakeo mufumi akazvipira kupa hafu yefuma yake, uye kudzosera mari yaaive atora nekunyengera kubva kuvanhu.
Ruka anoratidza kurudziro yaJesu pamupfumi aida kubva afamba nzira yakarurama ogovana pfuma yake navarombo. Kusangana naJesu, Munhu pakati pevanhu, kunotiita kuti tibvise maziso edu patiri tokwanisa kufunga nezvevamwe.
Ruka anotiudza chidzidzo chakaoma. Mumwe munhu mukuru akaenda kunyika iri kure kuti andopiwa vushe. Akasiya varanda vachitarira zvaaive nazvo. Asi vanhu venyika iyoyo vakavenga munhu mukuru uyu vaive vasingadi kuti atonge pamusoro pavo. Akasiya varanda vake mumwe nepondo imwe.
Jesu aitaura nezvenguva yaaizoenda kuDenga kunotigadzirira nzvimbo yokugara, asi akasiira isu maKristu kuti tiparidzire Evhangeri nekuparidza chokwadi kunyika inovenga chokwadi, isingadi kuva vatendi vaKristu.
RUKA 19:11 Vakati vachanzwa izvozvo, akawedzera akataura mumwe mufananidzo, nokuti wakanga ava pedyo neJerusarema, ivo vakati vushe bwaMwari bwobva bwovonekwa pakarepo.
Vaive vakatarisira kuti Jesu achabva aita hushe hwemaJuda ipapo ipapo panyika kupfurikidza kubvisa maRoma aivatonga. Vaive vakatarisira hushe hwezvematongerwo enyika munguva duku yaitevera.
Pakava nekurasika kwevanhu pakuonekwa kwaShe. Jesu aizoenda kwenguva nomwe dzemakereke. Pakuuya kwake Kwechipiri, aizovonekwa kwatiri mumashure mekunge amutsa vakafa, ashandura miviri yedu yakafuka kuvora kuita miviri yakafuka kusavora semuviri wake iye.
I JOHANE 2:28 Zvino vana vaduku garai maari, kuti kana achizovoneswa, tive nokusatya, tirege kunyadziswa vo, pamberi pake pakuvuya kwake.
Ndiye Shoko. Vanhu vakadzoserwa pakutenda kwemuTestamente Itsva ndivo vega vachashandurwa. Vamwe maKrisitu ose akaponeswa vachanyadziswa “nechichechi-chechi” chavo chemasangano pavachaona kuti vasiiwa.
I JOHANE 3:2 Vadikanwa, zvino tiri vana vaMwari, vuye zvichigere kuratidzwa kuti tichazovei, tinoziva kuti kana achizovoneswa, isu tichafanana naye; nokuti tichamuvona sezvaakaita.
Jesu paachadzoka, achaisa vatendi vechokwadi mumiviri mitsva.
RUKA 19:12 Naizvozvo akati: Mumwe munhu mukuru wakaenda kunyika yakanga iri kure, kuti andopiwa vushe, agodzoka zve.
Jesu anotaura nezvemunhu mukuru achienda kure. Saka yaizova nguva refu asati adzoka. Kwaisazova nekugadzirira kwekukasika. “Nyika iri kure” zvinotaura pamusoro pehushe hwemweya hwemereniyamu huchatongwa nenzira yepamusoro-soro kukunda nzira yemakaro, kuzvifungira uye ruvengo rwenyika dzedu dzepano panyika.
RUKA 19:13 Akadana varanda vake vanegumi, akavapa pondo dzinegumi, akati kwavari: shambadzirai kusvikira ndichivuya zve.
MaKristu akapiwa Testamente Itsva kuti vararame nayo. Hatina kuudzwa kuti tishandure chero chinhu muTestamente Itsva, asi kuita zvainotaura nekuritevera sezvarakanyorwa nevapostora, kusvikira Jesu achidzoka. Bhaibheri ndiro chinhu chakakosha chakapihwa maKristu naMwari kuitira kuti vatore ruponeso rweMagwaro nechokwadi cheBhaibheri kuvanhu.
RUKA 19:14 Asi vanhu venyika yake vakanga vachimuvenga, vakatuma nhume kumutevera, kundoti: hatidi kuti uyu munhu ave ishe wedu.
Asi vanhu vemunyika vanovenga kurarama pasi pezvinorehwa neBhaibheri. Pakupedzisira makereke akatangwa anotevera zvidimbu zveBhaibheri, vachiramba zvimwe zvidimbu. Kodzero dzevanhu dzakasimuka, vanhu vakatanga kuda kurarama zvichibva pazvinhu zvavanofarira ivo nezvido zvemoyo yavo zvinoitira ivo voga. Vangapihwirwei miganhu neBhaibheri rine mitemo yakawandisa inodzvanyirira hunhu hwevanhu. Vanhu vanoda zvinhu zvesainzi zvekushanduka kwevanhu kubva kumhuka kuti varatidze kuti vanobva kumhuka, kwete kunaMwari. Kuputika kukuru kusingazivikanwe kweBig bang yaive fungidzoro yakangwara, yaireva kuti nyika haidi Mwari kuti aisike. Pasina chikonzero chinoda Mwari muhupenyu hwavo, hunhu hwevanhu hwakaparara kusvikira vatanga kuhuratidza mukuita mabasa anonyangadza.
Zvitendero zvechipegani nechinyakare chavo zvakapfekerwa mudzidziso dzechiKristu nenzira yakachenjera. Kereke yakabva yaroorana nezvematongerwo enyika uye rudo rwepfuma. Mazana endudzi dzemaBhaibheri dzakazouya dzakabudirira kunzvenga chokwadi cheTestamente Itsva. Vanhu vakaramba pfungwa yekuti vanofanira kutenda zvakanyorwa muBhaibheri. Kana Ruka akati vazivi vakapinda mumba, vanhu vakabva vazvishandura vachiti vakapinda muchidyiro. Bhaibheri harina kubvira ratiudza kuti tipemberere zuva rakazvarwa Jesu, asi “tinoziva zviri nani” zvino, tinoita izvi mhemberero huru dzemaKristu pagore. Hatina kungwarisa here? Tiri kuudza Mwari zvatinoda kuita. Tinobva tatomuudza kuti tinoda kuzviita rini, musi wa 25 Zvita. Mwari anofanira achifadzwa kwazvo nepfungwa dzedu dzakajeka patinomunamata nenzira dzedu, saka tinogona kuzvidaidza kuti maKrisitu, kunyangwe tichishandura zvakanyorwa muBhaibheri. Jeremia Chaputa 10 inotiudza kuti tisateme muti toushongedza nesirveri nendarama, asi isu tinoziva zviri nani. Munhu wese anoda muti weKisimusi.
Jeremia akati hatifaniri kuita izvi. Nei achitiudza zvekuita? Tiri vanhu venguva yechimanje-manje vakangwara.
JEREMIA 10:2 Zvanzi naJEHOVA, regai kudzidza tsika dzamarudzi avanhu, musavhundutswa nezviratidzo zvokudenga; nokuti marudzi avanhu anovhunduswa nazvo.
(Zviratidzo zvezodiaki- nyeredzi dzenyu dzinotaura ramangwana renyu. MaKristu akawanda anotenda izvi)
3 Nokuti tsika dzavanhu hadzina maturo: nokuti mumwe anotema muti mudondo, riri basa ramavoko omunhu unoveza nedemo.
4 Vanovushongedza nesirveri nendarama, vanourovera nembambo nenyundo, kuti urega kuzununguka.
Saka maKristu akabva paBhaibheri, Magwaro haachatonge pamusoro pedu. Tave “nerusununguko”.
Asi zve, zvinosuwisa, Jesu anodzoka anosvikotitonga. Anoda kuziva zvatakaita nekutenda kweTestamente Itsva kwaakatanga nako kereke yekutanga.
Anodzoka kuzokohwa. Mbeu inokohwewa yakafanana nembeu yakadyarwa pakutanga, munguva yekereke yekutanga yakanyora Testamente Itsva.
RUKA 19:15 Zvino wakati adzoka kuya kwaakanga andopiwa vushe akaraira kuti vaya varanda vaakanga apa mari , vadanirwe kwaari anzwe kuti mumwe nemumwe akawanei nokushambadzira kwake.
16 Wokutanga akasvika akati: Ishe pondo yenyu yakawana dzimwe pondo dzine gumi zve.
17 Akati kwaari: zvakanaka muranda wakanaka zvawakanga wakatendeka pazviduku-duku, ubate maguta anegumi.
Muranda uyu aive adzosa vakawanda kuTestamente Itsva aizotonga maguta mazhinji munguva yeMereniyamu.
18 Wechipiri akasvika, akati: Ishe pondo yenyu yakawedzera zve pondo shanu.
19 Akati kwaari vo: newe ubate maguta mashanu.
Muranda uyu akadzosa vashoma pakutenda kwepakutanga kwevapostora asi izvi zvaive zvichiri zvakanaka aizotongawo maguta mashanu muMereniyamu, kunyange aive asina kuwanda seemuranda wekutanga aive ashanda nesimba.
RUKA 19:20 Zvino mumwe akasvika akati: Ishe; tarirai pondo yenyu heyi, yandakanga ndachengeta mumucheka.
Munotumira mupostora semutumwa kunguva yekereke yekupedzisira kunopedzisa zvakavanzika zvaMwari kuti atidzose pakutenda kwedzidziso dzemuBhaibheri dzekereke yekutanga. Asi makereke haatenderani naye, saka kuti arambe arinembiri uye asavatsamwise, anobva achengeta chokwadi chakaputirirwa mumucheka wepatafura inoshandiswa panguva yekudya. Ipapo anobva azvichengetera tikiti rake rechikafu kubva kumakereke, nekuti akangovaudza zvavaida kunzwa zvega.
RUKA 19:21 Nokuti ndakanga ndichikutyai, zvamuri munhu une hasha, munotora zvamusakaisa’po, munocheka zvamusakakusha.
Munhu ane hasha; Munhu akarurama. Anogara nezvinotaurwa neBhaibheri nenzira yarakanyorwa nayo. Asi muranda uyu aiziva kuti vanhu vaisada izvozvo.
Ishe anoramba kuyanana nenguva yanhasi yemafaro muchitendero nemumhanzi wemadhisiko unonakidza mumakereke. Ishe haangatambiri rubapatidzo mumazita matatu ezvinzvimbo aBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene iye achida Zita. Mapostora akatiudza kuti zita raidiwa ndiJesu Kristu, asi kana tikataura izvozvo tinobva tapera mbiri mumakereke asingadi kudzoserwa kudzidziso dzevapostora.
Ishe mudzidzisi akaoma anoramba zita rekuti Tiriniti nekuti harisi muBhaibheri. Izvi zvinobva zvatsamwisa makereke. Saka mutumwa wechitatu haana kubvira atsamwisa munhu, uye haana waakaudza pamusoro pechokwadi cheTestamente Itsva.
RUKA 19:22 Akati kwaari: ndichakutonga namashoko ako amene, iwe muranda wakaipa! Wakanga uchiziva kuti ndiri munhu une hasha, ndichitora zvandisakaisa, ndichicheka zvandisakakusha.
Mwari akaoma. Mwari akatora Sauro, akadzidziswa kwemakore mazhinji nemaJuda kusvikira akura papfungwa kuva muFarise wepamusoro, Mwari akabva amubata akamushandura kumuita Pauro, akabva ava muKristu wepamusoro uye muvengi mukuru wevaFarise. Diaborosi akanyunyuta kuti Mwari aive asingaiti zvakanaka.
Mwari akaoma. Kereke yeCatholic yakadzidzisa Martin Luther kuti ave mumonku wavo mukuru uye munhu akashinga, Mwari achibva amutora kubva kwavari akamushandisa kudzikisira kubata kwesangano reRoman Catholic raive ravaka chipo chake. Diaborosi akangogona kunyunyu ta kuti izvi zvaive zvisina kunaka.
Mwari akaoma. Mambo Henry VIII aive munhu akaipa akaroora katanhatu akauraya vakadzi vake vaviri. Kereke yeRoman Catholic yakaramba kumutendera kuramba nekuroorazve, yaive sarudzo yakanaka (yemuBhaibheri). Saka Henry akabva kukereke yeRoman Catholic nezvikonzero zvakashata zvega, kuti arambe nekuroorazve, akaita England nyika inopikisa Catholic mukuita uku. Kuipa kwekutsamwa kwamambo akaipa uyu kwakaita kuti hurongwa hwaMwari hubudirire pakuita masangano evapikisi muEngland. Satani akanyunyuta zve pamusoro pekuti Mwari akaita zvisina kunaka.
Hitler akauraya maJuda mamiriyoni matanhatu muhondo yepasi rese yechipiri nekuti aive akavavenga saka aida kuvaparadza. Izvi zvakaita kuti pasi rese zvenguva pfupi, rinzwire maJuda tsitsi, sangano reUnited Nations rakaita sarudzo muna 1947 dzekuvapa Palestina musha wavo. Saka totenda kuipa kwaHitler, maJuda akawana musha wavo. Vose Hitler naSatani vakanyunyuta kuti izvi zvaive zvisina kunaka.
Saka Mwari anoshandisa zvakanaka kana zvakaipa kuti azadzise hurongwa hwake.
Mwari akaoma uye akarurama. Anoda kutonga hupenyu hwedu nenzira yake. Haafadzwi nemifungo yedu uye zvido zvemoyo yedu kuti zvitiitire. Anoda kuti titeerere Bhaibheri rake sezvarakanyorwa riri. Ane zano renguva yekupedzisira rakanaka rinoda kubatana sekuita kwenguva, uye hatina zvatinobatsira kwaari kunze kwekunge umwe nemumwe wedu ateerera mune zvese zvaanoita.
LUKE 19:23 Zvino wakaregereiko kuisa mari yangu mubhanga, ndikazoitora pakudzoka kwangu yawanda?
Kupa mari iyi kubanga kwaizoita kuti umwe munhu aishandise zvine pundutso. Kana aive asina kugadzirira kuita chiro iye pachake, akadii kudududza akabatsira mumwe munhu aive akazvipira kudzosa vanhu pakutenda kweBhaibheri kwenguva yekereke yekutanga?
Zvino Ruka akanyora murairo wakaoma apo Mwari anoshanda nesu.
Nyika inozviziva nekuti “chausingashandisi, unorasikirwa nacho”.
Izvi zvinorevei pamweya?
Mupostora wenguva yekupedzisira anotidzidzisa kuti titore zaruriro yake tiidzosere kuMagwaro, toratidza pfunga yake nekuyananisa nevhesi remuBhaibheri.
RUKA 19:24 Ipapo akati kunavakanga vamire’po: mutorerei pondo iyo, muipe ane pondo dzinegumi.
RUKA 19:25 (Vakati kwaari, Ishe, watova nepondo dzinegumi.)
RUKA 19:26 Ndinoti kwamuri: mumwe nemumwe ane chinhu uchapiwa; asi usina uchatorerwa nezvaanazvo.
Kana Mwari akakupa muono wakadzama muMagwaro, woteerera izvozvo woedza kubatsira vamwe kuti vazive Magwaro akawanda, ipapo Mwari vanotoratidza zvizhinji kwauri.
Asi kana Mwari vakakuzivisa chimwe chinhu iwe worega kuita chiro nacho, Mwari vanotora kunzwisisa ikoko kubva kwauri okusiya mukutadza kwakadzama kukunda kwawaive.
Mwari anopa muono wakadzama kune avo vagara vanoona zvakawanda zvezvakavanzika zvake.
RUKA 19:27 Asi vavengi vangu avo, vakanga vasingadi kuti ndive Ishe wavo, vuyayi navo pano, muvavuraye pamberi pangu.
MaKristu anhasi akaponeswa, vasingatore Bhaibheri semukuru wavo, uye vasina kudzoserwa pakutenda kwakakurudzira mapostora nekereke yekutanga, vachaenda pakufa kwavo munguva yekutambudzika kukuru. Nei? Havatenderi Bhaibheri kutonga hupenyu hwavo.
RUKA 19:28 Wakati areva izvozvo, akatungamirira mberi achikwira Jerusarema.
Pakuuya kwake kwekutanga Jesu aive akanangana nekusvika kuJerusarema kuti vatore chirayiro kuti iye agofira zvivi zvemaJuda nemaHedeni. Pakuuya kwake kweChipiri Jesu achabvisa kereke yake yemaHedeni, odzokera zvakare pakutarisana neJerusarema sezvo ari kudzosera maJuda mumusha mavo Israeiri kuti iye azviratidze kwavari saMesias.
Zviitiko zvepasi rese zvinotenderera paIsraeri panoperera nguva yekereke yekupedzisira. Horokasiti yeGerman kubva muna 1941-1945, pakaurayiwa maJuda mamiriyoni matanhatu nemweya wegasi mumakembi kuPoland, yakasimudza mweya wekuzvipomera mhosva kwevanhu pasi rese kusvikira United Nations yavapa kanzvimbo kadiki kuti kave musha wavo muIsraeri kavaizogovana nemusha mukuru wePalestina. MaArabu vakaramba sarudzo iyi vakaita hondo ina kuti vabvise maJuda, vatore nyika yese yeIsraeri kuita yavo. Mwari vakaita kuti maJuda akunde muhondo iyi, nekuda kwekukunda muhondo vakakwanisa kuwedzera kukura kwemusha wavo. Syria, Hamas neGaza, neHezbollah neRebanoni vakaita hupikisi hwakakura vachirwisa Israeri. Saka Mwari akaita kuti kuite hondo yemarudzi kuSyria yaive yakaipa kwazvo zvekuti mutungamiri wenyika Assad wekuSyria akakumbira Hezbollah kuti imubatsire muhondo iyi. Saka vavengi veIsraeri vaviri vane simba ava vakabva vavharirwa muhondo inotyisa kwemakore, saka vakabva vamanikidzwa kusiya Israeri iri murunyararo.
Donald Trump akabva kusingazivikanwe achibva asvikokunda sarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica muna 2016 nekuti akanga avimbisa kutamisa mumiririri weAmerica kumuendesa kuJerusarema, saka nekudaro anobva aona Jerusarema seguta guru reIsraeri.
tarisai Israeri. Ndiyo chiringazuva chaMwari kuti chitiudze kuti yava nguvai yatiri kurarama mairi.
Mwari ari kugadzirira kutora kereke yake kuenda nayo kudenga kuti iye adzoke kumaJuda.
I VAKORINTE 15:52 Pakarepo nokubwaira kweziso, nehwamanda (trump) yokupedzisira, nokuti hwamanda icharira, ipapo vakafa vachamutswa nokusavora; nesu tichashandurwa.
Gakava nekudhonzeraka kwakaoma pamusoro pemasimba pasarudzo dzemuna 2016 kuAmerica kwakaita kuti zita rekuti “Trump” rive pamisoro yenyaya munhau dzepasi rese kwemwedzi yakati kuti. Akakanganisa kakawanda, akadzikisirwa naHillary Clinton panhaurirano dzevatungamiri venyika.
Asi anomiririra (trump) hwamanda yaMwari inorira panguva inomutswa vakafa.
Anodawo kubatsira Israeri kuti iwane Jerusarema rive guta ravo guru, zvisinei nehupikisi hwakaipa kwazvo hwemaArabu. Saka akatora masimba akaratidza vaizviti vanoziva kuti havana zvavanoziva pavaimuramba nekumudzikisira. Munhu aive akasimba uye achidiwa kwazvo Clinton, akakundwa.
Uku kumutswa kukuru kumakereke. Chiratidzo chenguva.
Masangano emarudzi akasiyana-siyana anosvika 30 000 nemamwe makereke asiri emasangano aripo nhasi uno ese anofunga kuti ndiwo anodiwa kwazvo naMwari nekuti vakaponeswa, asi vese vanoramba kutevera Magwaro zvakazara. Saka kana vakafa mukati menguva nomwe dzemakereke vakamutswa, masangano makuru emakereke anenge asisina basa, uye “mapoka maduku” airambwa, nekuti vaive vakadzoserwa kudzidziso yeTestamente Itsva yemapostora, vachaenda kuchirayiro chemuchato Kudenga.
RUKA 12:32 Musatya henyu imi kapoka kaduku, nokuti Baba venyu vanofara nekukupai vushe.
Jesu akabva adzoka kuJerusarema nenzira yaive isingatarisirwi zvachose.
Akaudza vadzidzi vake kuti vaende kukaguta kasina kutaurwa nezita kaive kasina kukosha mupfungwa dzevanhu.
Vaifanira kuuya nembongoro kubvako. Muridzi wembongoro haana chaaiziva pamusoro peizvi, asi akabvuma kuti mbongoro yake ishandiswe. Mbongoro yakatakura Jesu kupinda muguta raive risina kana kugadzirira Kuuya kwake.
Vanhu vakafara kwazvo kumuona. Vakuru vezvitendero vakapikisa.
RUKA 19:29 Wakati aswedera Betfage neBetania, kugomo rinonzi reMiorivi, akatuma vadzidzi vake vaviri,
30 Achiti; endai kumusha wakatarisana nemi; kana muchipinda mauri, muchawana mhuru yembongoro yakasungirwa, isina kumbotasva nomunhu; muisunungure mugouya nayo.
31 Kana mumwe akakubvunzai achiti: munoisunungurireiko? Muti kwaari kudai: Ishe unoida.
32 Avo vakatumwa vakaenda, vakandowana sezvaakanga avaudza.
33 Zvino vakati vachisunungura mhuru; vene vayo vakati kwavari; munosunungurireiko mhuru?
34 Vakati; Ishe unoida.
35 Vakauya nayo kuna Jesu; vakaisa nguvo dzavo pamusoro pemhuru; vakatasvisa Jesu pamusoro payo.
36 Zvino achifamba vakawarira nguvo dzavo munzira.
37 Akati oswedera pamaburutsiro egomo reMiorivi, vadzidzi vake vazhinji vose vakatanga kufara nokurumbidza Mwari nenzwi guru pamusoro pamabasa ose esimba avakanga vavona.
38 Vachiti, Mambo ngaakudzwe, iye unovuya muzita raShe! Rugare ngaruve kudenga nokubwinya kumusoro-soro.
39 Vamwe vaFarise pakati pavazhinji vakati kwaari: Mudzidzisi rairai vadzidzi venyu!
40 Akapindura akati: Ndinokuvudzai, kana ava vakanyarara, mabwe angadanidzira.
Zvakare vaive vaFarise, vakuru vezvechitendero, vanopikisa zvaiitwa naJesu, iye Shoko.
Nhasi uno vakuru vekereke vanoparidza dzidziso dzemasangano netsika dzawo vari kutadzisa maKristu kurarama nezvinoreva Magwaro.
“Chichechi-chechi” chakatsiva chiKristu. Vanhu vanoti, “Ini ndinotenda zvinotaurwa nekereke yangu, kwete zvakanyorwa muBhaibheri”.
RUKA 19:41 Zvino wakati aswedera pedyo akavona guta, akachema pamusoro paro;
42 Achiti; dai waiziva iwe zuva rinozvinhu zvingakupa rugare, asi zvino zvakavanzirwa meso ako.
Kusatenda kunochemedza Jesu. Kutenda kuBhaibheri kwega ndiko kunomufadza.
Mesias akavuya, Israeri yaive pamuganhu nemereniyamu yaive churu chemakore erugare panyika naJesu achitonga ari mambo. Asi maJuda vaive vakapofomadzwa nekuparidza kwevakuru vavo vezvechitendero. MaJuda airemekedza masinagoge, Temberi, nevakuru vavo vechitendero. Kana vakuru vechitendero vechiJuda vaituka Jesu, maJuda aizotevedzerawo muenzaniso wavo voita zvimwechete izvi. Izvi ndizvo zvibereko zvevatungamiri vevanhu.
Zvimwechetezvo, kana vakuru vemakereke vakazvidza vaya vanoda kutevera Magwaro zvakazara, zvino nhengo dzekereke imwechete iyoyo dzinoteverawo muenzaniso wavo. SemaJuda, makereke anhasi, zvisinei nekutambira ruponeso nemabasa akanaka, anoramba kurarama nemagwaro zvakazara. Zvisinei nekuti mweya yavo yakaponeswa kubva kuHadesi, miviri yavo iri kuenda kunoparadzwa munguva yeKutambudzika kukuru.
RUKA 19:43 Nokuti uchasvikirwa namazuva: auchavakirwa nawo muchinjiziri navavengi vako; vachakukomba, nokukumanikidza, pamativi ose:
44 Vachakuparadzira pasi, iwe navana vako, mukati mako; havangaregi mukati mako muine ibwe rimwe riri pamusoro perimwe; nokuti hauna kuziva nguva yokushanyirwa kwako.
Muna AD 70 mukuru wemauto ekuRoma Titusi akarwisa Jerusarema. MaRoma akavaka rusvingo rukuru rwakapoteredza Jerusarema. Ipapo hapana akakwanisa kupunyuka. MaJuda 1 100 000 akafa, vese vakuru navaduku. Temberi yakapiswa ikaparadzwa. Guta rakaitwa matongo rikasiiwa raparara. MaJuda vaive vasina kuziva zvaive zvakakoshera kuva naJesu pakati pavo. Kumupikisa ndiko kwaive kukanganisa kukuru kwavakaita. Aive pakati pavo, asi havana kuziva kuti aive ani.
Muporofita wenguva yekupedzisira anozivisa zvakavanzika zvekereke yekupedzisira achidzokera pakutenda kweTestamente Itsva kwekereke yekutanga. Asi makereke haakwanisi kunzwisisa zviri kuitika. Saka vanoramba vachienderera mberi netsika dzavo dzemakereke avo. Hatisi kuona kuti Jesu ari pakati pedu seShoko rakanyorwa.
RUKA 19:45 Zvino wakapinda mutembere akatanga kubudzisira kunze vakanga vachitengesamo.
46 Achiti kwavari; Kwakanyorwa kuchinzi imba yaMwari ichava imba yokunyengetera; asi imi makaiita bako ramakororo.
Jesu akaona zviri mberi kuti kereke ichashandiswa kuita mari zhinji kwazvo, izvi zvaizofukidza chiKristu mugore renyadziso. Jesu akasvipa vanhu ivavo vanoshandisa chitendero kuti vapfume. Makatsi akafuta achitendero, ari muzvitima zvemuto, akamuita kuti atsamwe kwazvo. Asi kunamata ndarama nekupfuma zviri kunyanya kwazvo mumakereke mazuvano.
MATEO 19:23 Jesu akati kuvadzidzi vake; Zvirokwazvo ndinoti kwamuri; zvinoremera mufumi kupinda muvushe bwokudenga.
Hakuchazove nevafundisi kana vaparidzi vakapfuma kudenga. Kupfuma kwakaita sangano, ndiko kuomawo kwazvo kuti rigone kupinda denga.
RUKA 19:47 Waidzidzisa zuva rimwe nerimwe mutembere, asi vapurista vakuru navanyori navakuru vavanhu vakanga vachitsvaka kumuvuraya.
48 Asi vakanga vasingawani zvavangaita nokuti vanhu vose vakamunamatira, vachimunzwa.
Vanhuwo zvavo vanoda Jesu uye vanozvipira kugamuchira Shoko rake, Bhaibheri.
Vakuru vemakereke vakazadzwa nekuda kuparadza kuzvipira kuBhaibheri kunoita vanhu uku.
Vakagadzira mazana emaBhaibheri akasiyana kuti vanhu vagare varasika kubva pakutanga. Vaparidzi vakagara vakataura kuti mune “zvakakanganiswa” muBhaibheri. Tsananguro yesainzi yeBig Bang inoshandiswa nemakereke mazhinji kupikisa machaputa ekutanga emuBhaibheri kuna Genesisi. Tsananguro iyi haina chainotsanangura pamusoro pechavanoti “Dark Energy” neyavanoti “Dark Matter”, inova 96% yezvese zviri panyika. Saka tinoti itsananguro isina maturo isingatarisi zvakawanda zvacho zvezvinhu zvinoonekwa panyika.
Makereke akagadzirisa tsananguro yeshanduko yevanhu kubva kumhuka, izvi zvinoreva kuti isu takabva pamhuka. Votanga kunyunyuta kuti vanhu vanobv a pamhuka. Vanofunga kuti kutenda kushanduko kunovaita vakangwara. Asi kutuka Mwari zvakazara sezvo munhu akasikwa nemufananidzo waMwari. Kwaive kusina rufu Adamu asati atadza. Saka nemhuka dzakafa mukati memamiriyoni emakore akadarika zvivi zvisati zvapinda zvese hazvina maturo. Rufu mubairo wezvivi.
Marasha anobva pazvinhu zvakafa uye miti akaitwa pakunaya kwakaita mvura yaNoa pazvaive zvakatsikirirwa nehuremu hwemvura zhinji yaive yakafukidza makomo makuru ose panyika. Hakuna marasha achiri kutanga kuitika nhasi uno, kunyangwe kana vesainzi vachiedza kumaita mumarabhoritari avo. Nei? Hutachiona nezvimwe zvinooresa zvinozviparadza kugadzira marasha kusati kwatanga. Rumwe rudzi rwemarasha ekutanga chaiwo rwaidaidzwa kuti trilobite, asi rudzi urwu rwakawanikwa mukati merasha redhindo reshangu kana nyatera remunhu naWilliam Meister muna 1968 pedyo neDelta, Utah. Saka marekodhi ekuwanikwa kwemarasha haangaite mamiriyoni emakore.
Mazwi anoita zvekuuya akaita se”Tiriniti”, “Mwari umwechete muvanhu vatatu”, uye “Munhu wechipiri paTiriniti” akaiswa muzvitendero zvemakereke, zvisinei nekuti haasi muMagwaro, seshoko rekuti “Kisimusi” nezuva racho “25 Zvita”. Makereke akabva ajaira kutenda zvinhu zvisiri muMagwaro izvi zvekuti havachatori zvakanyorwa muBhaibheri sezvakakosha kwavari.
Saka vakuru vemakereke vakabudirira kuparadzanisa vanhu neBhaibheri. Kana mukatenda kuti vazivi vekumabvazuva vakapinda muchidyiro kunoona Mwana Jesu, ipapo vakuru vemakereke vakagona basa ravo, nekuti hamuchatende zviri muMagwaro.